admin | MoeMaKa Burmese News & Media | Page 999
>Artist Maung Maung Tin - Art Work - Name Unknown
>100 Year Anniversary of Ludu U Hla marked at his native village
> ဖြားသက်ရညြ် သိုႛ …မောင်စမြ်းရည်ိုံဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ူပည်သူမုန်းလဵက်မုန်းတဲ့သူတေအြသက်ရည်ြရင်ရည်ြတဲ့ အေုကာင်းခံအတိတ်ကံ … တဲ့။ူပည်သူခဵစ်လိုႛခဵစ်တဲ့သူတေအြသက်ရည်ြရင်ရည်ြတဲ့ အေုကာင်းမန်ြပင်္စပြဍ္ဎန် …။ ။ ဖြားဋ္ဌကီးမာမောင်စမြ်းရည်ိုံဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ “မြိင်း“ ရဲႚ...
> လူထုဒေၞအမာ မြေးနေႛပြဲမဵား အမေရိကန်တငြ်ူပလြုပ်မည်မိုးမခအထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၂၃၊ ၂၀၀၇ ယခုလ ၂၉ ရက်နေႛတငြ် အသက် ၉၂ိံစြ်ူပည့်မည်ူဖစ်သော သတင်းစာဆရာ စာရေးဆရာဋ္ဌကီး လူထုဒေၞအမာ၏ မြေးနေႛအခမ်းအနားမဵားကို...
> သာသနာ့ဥသျှောင် ပဓာနစေရ ဆရာတော် ဦးကောဝိဒါဘိဝံသ (သို့) အနီရင့်ရင့်မြစ်တစ်စင်းအဘယဂီရိ ကြိုတင်အသိပေးပါရစေ ဆရာတော်ကြီးဟာသုံးဖက်မြင် သရီးဒိုင်မင်းရှင် ပန်းချီကား တစ်ချပ် ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ် ။ ဒါဆိုရင်ကျနော်ရေးမဲ့ ဆရာတော်ကြီးရဲ့ အကြောင်းဟာ တစ်ဖက်မြင် ၀မ်းဒိုင်မင်းရှင်းပဲ...
> သာသနာ့မောဠိ မစိုးရိမ်ဆရာတော်ဘုရာုးကီး ဦးကောဝိဒအင်ဒီယာနာူပည်နယ်၊ ဖိုႚ၀ိန်ူးမြိႚသိုႚ့ ကရောက်ူပီုးသ၀ၝဒတရားပြဲ ခဵီူးမငြ့်မည်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ သာသနာ့မောဠိ အဖြဲႚခဵပြ်ုကီး၏ ပဓနစေရ မစိုးရိမ်ဆရာတော် ဦးကောဝိဒသည် အင်ဒီယာနာူပည်နယ်၊ ဖိုႚ၀ိန်ူးမြိႚနေ...
> ဖိလစ်ပိုင် အိုံပညာရင်ြမဵားကလည်ူးမန်မာူပည်လတြ်ေူမာက်ရေးအတက်ြအိုံပညာူဖင့် သရုပ်ဖော်မိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ိုံဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ အောက်တိုဘာ ၂၉ရက်နေႚ၊ မနီလာူမြိႚတော်၊ တူပဒၝ လပ်ြရြားမြိံငြ့် ဘက်စုံအိုံပညာူပပြဲ ရေရြတုသဘင် ကို ကပ်ဘို...
> လူထုဒေၞအမာ မြေးနေႚအုကြိ အမတ်ြတရ အိုံပညိာိုံဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇နစ်နေမန်း ဘလော့ကပၝ၊ ပန်းခဵီသရုပ်ဖော်ကို အမတ်ြတရ ကူးယူဖော်ူပပၝတယ်။ No tags for this post. Related posts...
> ကဗဵာ ကယ်ြလနြ်ူခင်းလူအိမ်ိုံဝင်ဘာ ၂၂၊ ၂၀၀၇ ငၝ့ကဗဵာတနေရာကို ခေဵာ့ခေၞသြာူးပီးသတ်ပစ်လိုက်တာ ငၝသိတာပေၝ့။ အလောင်းကိုပန်လည်တြေႚရြိတော့ေူခတူခား လက်တူခားတကိုယ်လုံူးခစ်ရာ ဖဵက်ရာ အူပည့်တကယ့်ကိုမင်မကောင်းလောက်အောင်ပၝ အဓိပဍ္ဎၝယ် မရြိဘူးဗဵာအဓိပဍ္ဎၝယ် မရြိဘူးဗဵာအဓိပဍ္ဎၝယ် မရြိဘူးဗဵာအရက်ကို...
>Maung Swan Yi – The Three Sons of Burma
> The Three Sons of BurmaMaung Swan YiNov 21, 2007 When …..The soldiersGo backTo the barracks, The monksWill go...
>၂၀၀၇ ခိုံစြ်ိုံဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ်
> ၂၀၀၇ ခိုံစြ်ိုံဝင်ဘာလ ၂၁ ရက် မိုးမခ ရေဒီယို အစီအစဉ် မဵက်မြောက်ရေးရာ သတင်းမဵားသတင်းစာဆရာ စာရေးဆရာမဋ္ဌကီး လူထုဒေၞအမာ ၉၂ိံစြ်ူပည့် မြေးနေႛအထူးအစီအစဉ် –လူထုဒေၞအမာ၊ ကဗဵာဆရာ တင်မိုး၊...
>ူမန်မာူပည်သာမက အာဆီယိံိုံင်ငံမဵားတင်ြလည်းအာဏာရင်ြစနစ်မဵားမြ လတြ်ေူမာက်ရေး လိုအပ်နေေုကာင်းသက်သေူပသည့် ဗီဒီယို ရုပ်သံမတ်ြတမ်းထက်ြရြိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၃ိုံဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ စကဿာပူတငြ်ူမန်မာူပည် လတြ်ေူမာက်ရေး၊ လူႚအခငြ့်အရေး ကာကယ်ြစောင့်ရြောက်ရေး ကေ့းေုက်ာသံမဵာူးပည်သူုကားတငြ်၊ လမ်းမပေၞတငြ်...
> – Like Burmese Regime, Singapore Regime is also violating and abusing the basic human rights in their own...
> Singapore Police Abduction (Part 1)- Like Burmese Regime, Singapore Regime is also violating and abusing the basic human...
> နယူးယောက်တငြ် ကဵင်းပသည့် သာသနာ့ဥသ္တွောင်အဖြဲႚခဵပြ်၏ုသ၀ၝဒပေး တရားပြဲ အသံမတ်ြတမ်းထက်ြရြိမိုးမခ အထောက်တော် ၀၀၂ိုံဝင်ဘာ ၂၁၊ ၂၀၀၇ိုံဝင်ဘာ ၁၁၊ နယူးယောက်ူမြိႚနေူမန်မာမိသားစုမဵား စုပေၝင်းကဵင်းပသည့် သာသနာ့ဥသ္တွောင် အဖြဲႚခဵပြ်ုကီးထံမြုသ၀ၝဒခံယူပြဲ တရားမတ်ြတမ်း...
>စင်္ကာပူက အာဆီယံညီလာခံမှာ မြန်မာတွေ ဆန္ဒပြစဉ်က လင်းလက်ကြယ်စင်နိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇(သူ့ဘလောက်က ပြန်လည်ကောက်နုတ်ဖော်ပြသည်) ညနေ၆နာရီလောက်မှာ Orchard Hotel ရှေ့မှာ Asean Summit ကို ကျွန်မတို့မြန်မာပြည်သူလူထုက မကျေနပ်ကြောင်း ပြသဖို့အတွက်သတင်းကို ဒီနေ့...
>Maung Yit – After National Convention, What Next ?
>ပေဵာက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာမဵား စာရင်း – ၁
> ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ သံဃာများ စာရင်း – ၁မြစ်ဆုံနိုဝင်ဘာ ၂၀၊ ၂၀၀၇ မိုးမခ က အဖမ်းဆီးခံ၊ အထိမ်းသိမ်းခံ ဆရာတော်များ၊ သံဃာများ နှင့်တကွ ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ စာရင်းတွေကိုလည်း ဖော်ပြသွားပါမယ်။ ပြင်ဆင်စရာများ...
>ဓာတ်ပုံမဵားကေူပာတဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည် – ၁
> ဓာတ်ပုံမဵားကေူပာတဲ့ စစ်ဖိနပ်အောက်ကူမန်မာူပည် – ၁မိုးမခ အထောက်တော်မဵာိးိုံဝင်ဘာ ၁၉၊ ၂၀၀၇ သတင်းကို အူပည့်ရေိးိုံင်မသြာ ဓာတ်ပုံတြေ တင်ူပရမယ်ဆိုရင် စာဖတ်သူတြေ မူမင်လိုက်ရတဲူ့မန်မာူပည်က ဓာတ်ပုံတြေ အမဵာုးကီးပၝပဲ။...
Page 999 of 1,005«1...9979989991,0001,001...1005»